नोस्ट्राडेमस भविष्यवाणी : सन् २०२२ निकै डरलाग्दो हुनेछ, विश्वले देख्नेछ यस्ता विनाशका दृश्य
एजेन्सी । अन्य वर्षहरुको अन्त्यमा जस्ते यस वर्षपनि नोस्ट्राडेमस भविष्यवाणी सार्वजनिक गरिएको छ । अन्य वर्षहरुका जस्तै यस वर्ष पनि सन् २०२२ को लागि फ्रान्सेली भविष्यवक्ताको भविष्यवाणी बाहिर आएको छ ।
१४ डिसेम्बर १५०३ मा फ्रान्समा जन्मेका, नोस्ट्राडेमसले १०० श्लोकहरूको धेरै शताब्दीहरूमा आफ्नो भविष्यवाणीहरू गरे। त्यस्ता शताब्दीहरूको संख्या १२ छ, जसमध्ये पछिल्ला २ शताब्दीका धेरै श्लोकहरू उपलब्ध छैनन्।
यी शताब्दीहरूलाई शताब्दी भनिन्छ। नोस्ट्राडेमसको यस कालक्रम अनुसार, हामी चन्द्रमाको दोस्रो ठूलो चक्रबाट गुज्रिरहेका छौं, जुन १८८९ मा सुरु भयो र २२४३ मा समाप्त हुनेछ। नोस्ट्राडेमसका अनुसार यो अवधि मानवजातिको लागि रजत युग हो।
नोस्ट्राडेमसले करिब ४९९ वर्षअघि आफ्नो भविष्यवाणी गरेका थिए । नोस्ट्राडेमसको यस पुस्तकमा कुल ६३३८ भविष्यवाणीहरू रहेका छन्।
सन् २०२२ को लागि नोस्ट्राडेमसको भविष्यवाणी:-
१. परमाणु बम विस्फोट हुनेछ र विनाश हुनेछः नोस्ट्राडेमीका विज्ञहरू भन्छन् कि सन् २०२२ मा विनाशकारी आणविक बम विस्फोट हुनेछ र यसले जलवायु परिवर्तन ल्याउनेछ र पृथ्वीको मौसम परिवर्तन हुनेछ। यसबाट धेरै परिवर्तनहरू देखिनेछन्।
२. क्षुद्रग्रह पृथ्वीमा प्रकोप हुनेछ : नोस्ट्राडेमसको वर्ष २०२२ को भविष्यवाणी अनुसार, क्षुद्रग्रह पृथ्वीको समुन्द्रमा खस्नेछ, जसले भयानक छालहरू निम्त्याउँछ जसले पृथ्वीलाई चारैतिरबाट घेर्नेछ। जसका कारण धेरै राष्ट्र डुब्ने खतरामा छन् ।
३. तीन दिनसम्म सारा संसारलाई अन्धकारले ढाक्नेछ : उनको भविष्यवाणी अनुसार सन् २०२२ ले विनाश र त्यसपछि शान्ति ल्याउनेछ। यो शान्ति हुनु अघि सारा संसारमा ७२ घण्टा अन्धकार हुनेछ। पहाडमा हिउँ पर्नेछ र धेरै देशको युद्ध सुरु हुने बित्तिकै समाप्त हुनेछ। यो एक प्राकृतिक घटना को कारण हुनेछ।
४. मुद्रास्फूर्ति अनियन्त्रित हुनेः नोस्ट्राडेमसको भविष्यवाणी अनुसार सन् २०२२ मा मुद्रास्फीति नियन्त्रणबाहिर हुनेछ र अमेरिकी डलरको भाउ ह्वात्तै घट्नेछ ।
५. फ्रान्समा ठूलो आँधी आउने : सन् २०२२ मा फ्रान्समा ठूलो आँधी आउने बताइएको छ । जसका कारण भयंकर आगलागी, खडेरी र बाढीको अवस्था आउनेछ । यसले विश्वव्यापी भोकमरी निम्त्याउनेछ।
६.रोबोटले मानिसजातिलाई नष्ट गर्नेछ : नोस्ट्राडेमसको भविष्यवाणी अनुसार २०२२ मा पर्सनल कम्प्युटरको मस्तिष्कले मानिसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछ । अर्थात् सन् २०२२ मानव इन्टरफेस भएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्प्युटरको हुनेछ र रोबोटले मानव जातिलाई नष्ट गर्नेछ ।
७. भूमध्य सागरमा विस्फोटः भविष्यवाणी अनुसार, मेनोर्का टापु नजिकै भूमध्य सागरमा मिसाइल परीक्षणको क्रममा ठूलो विस्फोटको सम्भावना छ।